I-PsyOp enzulu ye-deepfake 'ghyOp yokuthatha yonke inkululeko yakho kunye nokuqaliswa' kwamapolisa acingayo '(icandelo le-3): UMartin Vrijland
Intsapho ye-Ghost, utata wesiporho, unyana wesiporho. Isiporho somoya siya kufumaneka kungekudala kwigadi yesiporho, kuba ibali lesiporho kufuneka lihlale limnandi kwaye "liyinyaniso". I-PsyOp yazisa ngamapolisa kaGeorge Orwell kunye nokukwazi ukujonga emva kwecango ngalinye ngaphandle kwewarandi yokukhangela. Ibali libekwa engqondweni yakho yonke imihla nguDe Telegraaf; Iphephandaba elibuye lixhase ulawulo olwaqhubayo ngo-'40 / '45. Kwaye loo mthetho wokuhlaselwa uyeza kwakhona namhlanje.
Ukuba umthetho woqhankqalazo uyeza ngokukhawuleza ubonakale ngexesha lokuqala Ukusasazwa kwePeacock ngeli bali lesiporho. UJanny Knol, usekela-mphathi wamapolisa (isini esingaziwayo), wandixelela ukuba amapolisa ayekhe aye kwifama yesiporho kuba kukho ukrokrela ubukho bekhula. Kodwa, uthe, amapolisa awanakukwazi ukujonga ngaphakathi, kuba utata wesiporho ubangenisile. Sele uyazi ukuba umthetho omtsha uyasebenza apha ekufuneka ususe isithintelo ukujonga ngasemva komnyango wangaphambili, ke siza kwenza nendawo yokuhlaselwa ngexesha langoku. Imijikelo apho wonke umntu ovakalisa izimvo eziphambukayo unokuthathwa.
"Ah, Vrijland, awuhambi kancinci ngoku? Awuhambi kancinci?"Ngaba ukhe wabuza umbuzo ofanayo malunga nengxelo yeendaba? Ngaba uhlala ugxeka abaphathi bokuqonda abahlawulelwayo kwaye bahlawule kakuhle, ewe, banikine iindwendwe zetafile; iintlobo ezifana noJeroben Pauw? "Ewe, ngamanye amaxesha ziba nzima!"Ewe, basebenza ngendlela eya kukuphazamisa kubuxoki obukhulu kwaye baqhubeke ibali elisisiseko liqhubeka. Ngaba awukaqapheli? Eli bali lonke alikho nto ngaphandle kokusebenza kwengqondo (PsyOp), njenga ngaphakathi inxenye ye1, inxenye ye2 en inxenye ye3 kwizinto zam. Kuya kuba kuhle ukuba ufunda la manqaku kunye nezabelo, ukuze kungabikho namnye uthi:Wir haben es umzala onqwenelayo".
Unyana ka-Spooky uJan, uyayazi loo nyana ebethe i-back beer ye-5 ukuphakamisa i-alarm enkulu malunga "nokuhlutha inkululeko ngokungekho mthethweni" nguyise, ngoku udlala indima yokubeka i-ajenda ye-LGBTI kwimephu. Kungenxa yokuba ngokukhawuleza sinomxholo omnye obalulekileyo, oya kuthi urhulumente asinike wona kamva Ingqondo inokuphosa esiseleni ukuba ijonge. Umzekelo, ukuba unayo nayiphi na inkcaso malunga nokusasazeka kwe-LGBTI kwizikolo eziziiprayimari, uya kuthi ga ngoku unxibelelaniswe notata womphefumlo ophuma kweli bali lesiporho. Emva kwayo yonke into, uthathe abantwana bakhe esikolweni kwaye wayezolwalamano lwamadoda kunye nomntu obhinqileyo. Oku kucace gca kwiividiyo zakhe ezintle ezinzulu, ngokwe-De Telegraaf:
Kucace gca ukusuka kwiintshumayelo zikaGerrit Jan van D. ukuba uluvo luphi ngolwalamano olusempilweni. Ngokomyalelo kaThixo, indoda kufuneka ingene kulwalamano lomfazi. Ukuba awukwenzi oko, ke uku 'luthando lokungcola', ke ume ngokomoya emaqatheni akho 'kumanzi olwandle', utshilo uVan D. kwenye yeentshumayelo zakhe.
Yinkqubo ecocekileyo nenobuchule esiyingqinayo. Utata uGerrit Jan ('ghost utata') une'zimvo zokujonga 'kwaye kubonakala ukuba unento ngokuchasene nesitabane. Yiloo nto ke eyayibangela ukuba unyana kaJan, aphuphe abalekele eCanada (okanye sele ekhona, ayicacanga loo nto, kuba akukho nto icacileyo). Umfanekiso we PsyOp ukrwelwe ukuba utata wayefuna ukufundisa abantwana heteronormatively and let ghost son Jan just be gay. UJan wayefuna ukubaleka ulawulo lukatata "John Eagle", ngumfanekiso. Ude wathandana ne-bartender yaseRuinerwold. Elo bartender limnandi lamncedayo wabiza amapolisa.
Abantu benziwa imithambo belungele ukwenziwa kwamapolisa kaGeorge Orwell. Bambalwa abantu abangamaDatshi abaya kuba nxamnye nale. Ngapha koko, uninzi luya kuyifumana ilungile into yokuba abantu abaneengcinga eziphambeneyo, umzekelo i-heteronormativity (ubungqingili njengesiqhelo) lumbono wokuvalelwa kwinkampu yemfundo ephinda ibekho (ulungiselelo lononophelo lweGGZ). Kwaye ngenxa yoko kunomdla kakhulu ukuba amapolisa akasasifuni isiqinisekiso sokukhangela, kodwa anokungena nje. Utata uGerrit Jan kuthiwa weza nabantwana bakhe kwiqela lesikolo sasekhaya kuba babezolandela imithetho karhulumente. Oku mhlawumbi kubonisa ukuba abantwana bakhe bafundiswe ngokuhambelana kwe-LGBTI kwaye akavumelani noku. Ke ukuba kwixa elizayo ufumanisa ukuba kufanelekile ukuba abantwana bakho kwisikolo saseprayimari bamamele ukumamela ukumkanikazi obaxelela ukuba ayisiyo inkwenkwe okanye ntombazana, kodwa ukuba basenako ukukhetha isini sabo kwaye nithetha into ngaloo nto, umntu onokuthi abe ngumsiphikisi. Le ntsapho ye-ghost PsyOp sele iyithathile loo nto.
Ke siyakubona ukulungiswa komthetho wokuhlaselwa, kodwa ngenxa yokuba awusabizwa kwaye kuba abantu bangeniswe kwimodi yokwamkelwa ngokusebenza kwengqondo, akukho mntu uya kuphikisana nokungeniswa kwesi sicelo samapolisa kunye neendlela zakhe zokuhlasela.
Ukucinga ngeHolland, ndibona imilambo ebanzi ihamba kancinci ngokuhamba kumathafa asezantsi, imigca yeeplse ezingavakaliyo ezimile ngathi ziintsiba ezinde ekugqibeleni; nakwiindawo ezinkulu ezifuywe iifama ezisasazeke kulo lonke ilizwe, amaqela emithi, iilali, iinqaba eziphantsi, iicawe kunye ne-elms kwimeko entle. umoya uthoba kwaye ilanga lithe chu ngokuthe ngcembe kwimiphunga enezimvi, kwaye kuyo yonke imimandla izwi leTelegraaf liyamkelwa kwaye liviwe ngaphandle kokugxekwa.
Uludwe lwekhonkco lovimba: npostart.nl, i-assercourant.nl
tags: 1984, ukufa, ukhozi, eziziimbalasane, ukucinga ngamapolisa, iingcinga zamapolisa, George, fu maneka, UJanny Knol, John, sebenza, Orwell, yengqondo, psyop, uhlaselo, uhlaselo, Umthetho we-razzia0, umthetho wokuhlasela, URuinerwold, Isiporho losapho, umama wesiporho, ghost utata, Isono son, ekhoyo
23 Oktobha 2019 kwi-22: 36
Kwimeko engaqhelekanga kunye ne-spooky
Imfihlakalo engaqhelekanga ejikeleze ukubulawa okubini? okoko wabanjwa umsolwa
ngenxa yokufunyanwa kwemizimba emibini engenabomi kuMartin Luther KingLaan eDiemen.
Nguwuphi umbuzo osengqiqweni, kutheni bafunyanwa ngubani kwaye njani? , yonke into ihlala kwindawo engaziwayo, i-spooky, i -ununuts yemizobo yendlu.
Kubonakala ngathi sisiqendu sesine sendawo yesepha, i-NL incinci.
Umrhanelwa akazange avule ucango lokungena nangaphezulu kwaye kutheni zingekho ii-ambulensi, emva kwayo yonke loo nto bekukho ezimbini !!! Ukuzisola kwabafi, ukuvuselelwa kunye nemibuzo emininzi ...
24 Oktobha 2019 kwi-21: 42
Ah, ewe yayilixesha kwakhona lokuba umyalezo omtsha kwi-Telegraaf .. ngaba babeza kuyigcina iliso lam kumda wam wexesha we-Facebook?
Isicatshulwa sidityaniswe kakuhle:
(simahla ukuba kufundwe ngendlela ye-Incognito yesikhangeli sikaGoogle)
Ndiyakholelwa ukuba isiqingatha secawa yase-Netherlands sikholelwa kwizingelosi nakwiidemon. Ngapha koko, amawaka ezigidi zabantu emhlabeni bakholelwa kwiingelosi, kwiidemon okanye kwijein (ngokweSilamsi).
Oko kuthetha ukuba silinde usasazo lwe-Pauw olandelayo apho ingcali yehlelo liza kuchaza ukuba zazinjani iimbono zikaJohn Eagle!
Uphi uPeter R. kweli bali? Ewe ewe, iyakulungiswa loo nto ukuba uvavanyo lwe-DNA lwenzelwe umama wesiporho! (kodwa nolu luluvo malunga nokuba ukulandelelana kweskripthi kuya kujongeka njani)
28 Oktobha 2019 kwi-13: 39
Enye yezigqibo zam emva kokufunda amanqaku akutshanje kule webhusayithi:
Kuya kufuneka sonke siqiniseke ukuba, phakathi kwezinye izinto, la malungelo alandelayo akathathelwa kuthi, kuba la malungelo aya kuhlala esongelwa ngabantu kunye namaziko afuna amandla nangaphezulu:
-ilungelo lokunqaba ukukhangelwa kwendlu ngaphandle komyalelo wenkundla
-lungelo lokufunda kwimfundo yasekhaya (enokwenzeka phantsi kweemeko ezithile ezisemgangathweni)
-lungelo lokunqaba ugonyo
-ilungelo lamagosa eefilimu kwiofisi okoko ungabaphazamisi emsebenzini wabo
28 Oktobha 2019 kwi-13: 48
Kodwa ngaphezulu kwako konke: ilungelo 'lokucinga into oyifunayo'
Ukwaziswa kwamapolisa okucinga.
Yazi, le ndoda yayikholelwa kwiziporho. Malunga ne-5 yezigidigidi zabantu emhlabeni bayayenza loo nto. AmaKristu kwiingelosi kunye needemon, amaSilamsi i-ditto kunye namaKristu abavangeli bakholelwa ukuba iNkosi yathumela umoya wakhe oyiNgcwele ngePentekosti. Sineholide yeWhitsun.
28 Oktobha 2019 kwi-15: 31
Ndiyabulela ngokudibanisa, ihlala ihla kuloo nto.
Wonke umntu unelungelo lokucinga / ukukholelwa into ayifunayo, kunye nelungelo lokwenza ngokufanelekileyo, okoko oku kungangqubeki amalungelo kunye nenkululeko yabanye.
Uluvo lokuziphatha alukho nzima ebantwini abacinga, kwaye akufuneki ukuba nivumelane omnye nomnye kwiinkcukacha.
28 Oktobha 2019 kwi-15: 42
Kwaye malunga nento yeendaba ngokwayo, iyahlekisa indlela enkulu ngayo / enenkcukacha yokufaka ingxelo ngalo, kwaye oku kubonisa ngokuqinisekileyo injongo. Nokuba le njongo yeyokonwabisa abantu abasebenze ngentsimbi yexesha langokuhlwa, okanye ukukhuthaza utshintsho kwimithetho, akukho ngqondo. Inyani isele yokuba kufuneka sikhusele amalungelo ethu kwaye uyaphikisana malunga noku, ndicinga ukuba yinto elungileyo.
28 Oktobha 2019 kwi-21: 24
jonga isonjululwe, ayifanelanga ukuba ngabantu abanzima. Thatha nje uvavanye….
29 Oktobha 2019 kwi-10: 51
Iziganeko ezizodwa mva nje. Kule mihla, emva kwetyala lika-Anne Faber, ijaji ikwaze nokufumana indima emibini njengengcali yengqondo. Iinkampani zorhwebo zabelwe indima ezimbini njengamapolisa ...
1 Novemba 2019 kwi-23: 49
Umama van Ruinerwold akazange angcwatywe, kodwa ngasese watshisa isidumbu ngokwe-Telegraaf, ngokusebenzisa
I-crematorium ikhupha ifayile ekhethekileyo, masenze ntoni apho kwakhona?
ngu. Umama akazange angcwatywe, kodwa ngokwebhola yekristale yeTelegraaf.
Akungcwatywanga egadini kodwa watshiswa ngento ebizwa ngokuba "yifayile ekhethekileyo".
Asinakukhupha iinkcukacha, kodwa?
2 Novemba 2019 kwi-13: 58
Abantu abanembono yobuKristu ngobomi abadli ngokutshisa ngenxa yenkolelo 'yokubuyela empuma'.
Kodwa bafunda ngale nto, ke ilinde ispin elandelayo ..
« I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-2)
Uhlaselo lobugwenxa beLondon, iManchester, iParis, iBarcelona kunye neRotterdam kwi-23 kunye ne-24 ngo-Okthobha? (UPHAKATHI)) »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.056.982